Sakafo masira mena (RYRE) fanampiny- Wisepowder
Inona no atao hoe Fangaro masira Mena
Sakafo masaka mena (RYRE) dia atao rehefa ny mason-koditra iray manokana antsoina hoe vary madascus purpureus ferment. Mivadika ho maizina ny vary ary mamokatra zavatra simika fantatra amin'ny hoe monacolin K izay manana fanafody fitsaboana. RYRE dia tafiditra tao amin'ny TCM (fanafody nentim-paharazana sinoa) nandritra ny taonjato 10 mahery. Amin'izao fotoana izao, amidy ho famenony sy ho sakafo ara-pahasalamana manerana an'izao tontolo izao.
Ahoana no fiasan'ny masirasira mena
HMG-CoA reductase enzyme dia fiovam-po izay manova molekiola fantatra amin'ny hoe HMG-CoA ho mevalonate. Ny solika Mevalonate dia sakana lehibe manangana trano ho an'ny molekiola hafa 1000, toy ny kolesterola. Monacolin K dia miasa mitovy amin'ny lovastatin ao amin'ny mamatotra azy amin'ny HMG-CoA reductase manakana ny famokarana kolesterola.
Ny Mevalonate dia mety hovana ihany koa ny molekiola manan-danja toy ny coenzyme Q10 izay mihetsika toy ny antioxidant.
Ny RYRE dia misy fitambarana hafa ankoatry ny monacolin K. Izy io koa dia manana rafitra feno sarotra kokoa raha oharina amin'ny lovastatin. Raha ny filazan'ny mpahay siansa, ireo mpiorina vary masirasira mena dia mety hampihena ny voka-dratsy ateraky ny monacolin K.
Misoroka zava-mahadomelina ve ny fanafody masirasira?
Ny katsaka mena dia azo sokajiana ho fanafody iray sy sakanana. Izany dia satria iray amin'ireo saro-bidy tena ilaina amin'ny mason-koba mena mena dia monacolin K. Io koa dia antsoina hoe lovastatin izay singa mavitrika amin'ny fanafody iray antsoina hoe Mevacor. Noho izany, RYRE amin'ny lafiny iray dia tambin-tsakafo manampy amin'ny fihenan-danja kolesterola raha eo an-danin'izany kosa, ny mpanamboatra fanafody Mevacor dia nanambara fa tompony ny zon'ny patanty amin'ny menaka lovastatin.
Ny fangaro goavam-be ao amin'ny mason-koba mena dia voasokajy ho fanafody FDA ihany koa. Izany no mahatonga an'i RYRE misafotofoto mahasokajy ho toy ny fanafody sy hanina.
Soa azo avy amin'ny masirasira mena
Ireto misy resahina eto ambany dia tombony azo avy amin'ny masirasira:
Mihena ny koba mena ny koba mena
Ny kolesterola ratsy ratsy avo lenta dia olana ara-pahasalamana mafy mifandraika amin'ny hatavezina, fanoherana ny diabeta diabeta, lalan-dra, tosidra ambony, ary aretim-po. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fifehezana ny haavon'ny kolesterola ratsy sy hiarovana ny vatanao amin'ireo fanamby ara-pahasalamana ireo dia ny fihinanana sakafo mahasalama sy ny fomba fiaina mavitrika. Na izany aza, olona vitsivitsy dia mety ho mora voan'ny kolesterola ratsy ratsy na eo aza ny fanarahana ireo dingana ireo.
Ny vovoka masira mena manala ny kolesterola mifehy ny vokatra dia vokatry ny fahafahany mampitombo HDL (kolesterola tsara) ao anaty rà ary mihena ny triglycerides sy ny LDL (kolesterola ratsy). Ny famatsiana masom-bokatra hevi-kena mena dia manakana ny fahazoana lanja sy mihazona ny ambaratonga mahazatra amin'ny leptin sy ny enzim-pohy.
Tao amin'ny fikarohana maromaro izay nahitana mpandray anjara saika 8,000 dia nampidina LDL (ratsy kolesterola) ary kolesterola tanteraka ny olona naka tambin-tsakafo mena. Tsy nahitana fahasimbana amin'ny asan'ny voa na ati-doha koa izy ireo.
Ny taolana mena dia manala ny fanaintainana ambany kokoa
Ny fanaovam-panavotana dia valinteny iraisan'ny tsy fahatomombanana natao mba hiarovana ny vatantsika amin'ireo fitaovana avy any ivelany sy ny areti-mifindra.
Ny fanaintainana lava amin'ny fotoana maharitra dia inoana fa hiteraka aretina mitaiza toa ny aretim-po, diabeta, ary homamiadana. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny fandraisana menaka ahitra mena (RYRE) mety hanampy anao hampihena ny ho fanaintainana ary hanatsara ny fahasalamana maharitra ela kokoa.
Ohatra, fikarohana iray izay nahitana olona 50 voan'ny aretin'ny metabolika dia nanaporofo fa ny fahazoana masira hena ary ny taolam-oliva dia mihena ny fihenan-tsoratry ny oxidative izay antony lehibe mahatonga ny fanaintainan'ny aretin-tsaina hatramin'ny 20 isan-jato.
Toy izany koa, ny fikarohana iray momba ny biby dia nahatsapa fa ny voalavo amin'ny fahasimban'ny voa dia ny vovobony azo avy amin'ny masirasira dia mihena ny haavon'ny proteinina manokana mifandraika amin'ny fihanahana.
Ny fitrandrahana masirasira mena dia manana fananana anticancer
Ny porofo sasany avy amin'ny fandinam-biby sy ny sela dia manaporofo fa ny valan-jaza mena dia mety manampy amin'ny fampihenana ny fihanaky sy ny fitomboan'ny sela homamiadana. Ny fikarohana iray dia nanolo-kevitra fa ny hanome ny voalavo amin'ny homamiadana prostate mena vovony masira mihena no mampihena ny fihanaky ny fivontosana raha oharina amin'ny vondrona mifehy. ...
Ny fikarohana natao tamin'ny fantsom-panadihadiana dia nanaporofo ihany koa fa ny fametrahana ny vovobon-koba mena mangetaheta ny homamiadana homamiadana dia mihena ny fitomboan'ny sela homamiadana mihoatra ny lovastatin.
Ny fihinana masirasira mena dia manatsara ny fahasalamana amin'ny ratra
Ao amin'ny fandinihana iray misy ny totozy, ny vovony masaka ranom-boasary dia mampihena ny fahaverezan'ny taolana amin'ny totozy miaraka amin'ny osteoporosis. Ny mason-tsolika nomena ny masirasira hena dia misy sela misy taolana mahasalama ary ny fitrandrahana mineraly taolana kokoa noho ny plasebo
Ny mason-tsolika mena dia mampitombo ny fanehoana ny genin'ny BMP2, izay tena ilaina amin'ny fanasitranana ny taolana tapaka.
Fatran'ny masirasira mena
Aza adino fa ny habetsaky ny menaka manan-danja indrindra fantatra amin'ny anarana hoe monacolin dia mety miovaova ao anaty famoana masom-bary mena. Izany dia satria misy fihenam-peo maromaro miavaka amin'ny masirasira ary isan-karazany ny fermentation ampiharina. Ny fikarohana momba ny vovom-bary mena misy masirasira isan-karazany dia nanambara fa ny votoatin'ny monacolin dia manomboka amin'ny zero ka hatramin'ny 0.58 isan-jato.
Na dia misy fikarohana isan-karazany aza dia nanolotra fatra vary masirasira mena manokana, tsy azonao atao ny milaza raha manana marika monacolin ampy ny marika ampiasainao. Tsy maintsy atao ny mijery ny votoatin'ny monacolin amin'ny famenon-tsakafo alohan'ny hanapahana hevitra momba izay dosie ny masirasira mena mampiasa.
Ao amin'ny TCM (Fanafody Sinoa nentim-paharazana), ny fatran'ny masirasira mena (hena). Na izany aza, ny fikarohana sasany dia nampiasa fatram-bokatra masirasira 600 mg fatra in-efatra isan'andro. Ny fandinihana hafa dia manoro hevitra koa ny maka taon-koba mena misy 1200 mg in-droa isan'andro.
Vokatra amin'ny masirasira mena
Ireto misy dinika eto ambany dia misy fiantraikany masirasira;
Amin'ny olona maro, ny vary masaka Mena dia amin'ny ankapobeny dia raisina rehefa esorina amin'ny vava be ka hatramin'ny 4 taona sy 6 volana. Izany dia mifanaraka amin'ny National Instituto momba ny Fahasalamana (NIH).
Lovastatin dia hita ao amin'ny vokatra isan-karazany ny vary misy masirasira. Ny fitrandrahana mahery vaika be dia be dia be ny vokatry ny masirasira variroa isan-karazany toy ny fahasimban'ny hozatra mahery sy ny fahasimban'ny atiny sy ny voa. Ny Lovastatin izay tsy misy masirasira dia misy fiantraikany mitovy amin'izany.
Ny citrinin dia mety ho voan'ny vary masirasira mena koa rehefa masaka masaka tsara. Citrinin dia poizina misy poizina ary mety hiteraka fahavoazana amin'ny voa. Ny fahasarotana amin'ny vary masirasira hafa dia mety misy fangirifiriana, aretin'andoha ary fikorontanan'ny vavony.
Ny mason-tsoavaly mena dia fanesorana ireo fifandraisana amin'ny rongony
Ireo zava-mahadomelina izay mampihena ny kolesterola
Raha tsy eo ambanin'ilay dokotera dia tsy tokony hihinana ny masirasira mena ianao miaraka amin'ny fanafody manahena ny kolesterola. Ny vary masaka mena dia mety hanatanjaka ny vokatr'ireo zava-mahadomelina ireo. Izany dia mahatonga ny risika manimba ny aty ho lasa avo kokoa. Raha toa ka voan'ny statin ianao na fanafody hafa hampihena ny kolesterola, manatona ny dokotera alohan'ny maka masom-boalavo mena.
Ny haavon'ny CoQ10 dia azo ampidinina statins. CoQ10 dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalaman'ny hozatra sy ny fo. Izy io koa dia manampy amin'ny famokarana angovo. Ny tsy fahampian'ny CoQ10 ampy dia mety hitarika ho amin'ny havizanana, fanaintainan'ny hozatra, fahasimbana ary fanaintainana. Ho fanampin'izany, ny vary masirasira mena dia mampihena ny habetsahan'ny CoQ10 ao amin'ny vatana. Raha te haka CoQ10 ianao ary mbola mampiasa akora mena misy masirasira mena dia mankanisa tsara amin'ny dokotera.
Sakafo masira Mena-mena
Ny famenony izay misy vary masirasira mena dia efa amidy tany Etazonia efa ela. Mampihena ny kolesterola sy ny lipida hafa ao amin'ny lalan-dran'ny olombelona izy ireo. Ny taona faramparany izay misy ny fampahalalana dia 2008 sy 2009. Sakafo ara-tsakafo ny vary masà mena dia amidy 20 tapitrisa dolara isan-taona. Araka ny valin'ny fanadihadiana momba ny fahasalamam-pirenena tamin'ny taona 2007, dia 1.8 tapitrisa ny valin-tenin'ireo rehetra Amerikana izay nampiasa ny kolesterola hampihena ny sakafo ara-pahasalamana.
Na izany aza, mila mitandrina ianao rehefa mividy ireo soso-kevitra ireto satria tsy azo antoka ny vokatra sasany avy amin'ny mpivarotra tsy ara-dalàna. Ny sasany amin'ireny sakafo ireny dia mety hisy otrikaretina mety hanimba.
Sakafo masaka mena izay vidiana
Raha te hividy ny masom-bary mena tsara ny masirasira ianao, dia mazoto amin'ny Internet sy mitady fikarohana orinasa iray izay manana traikefa an-taonany maro amin'ny famokarana sela ahitra. Mitadiava a orinasa izay efa niantoka betsaka tamin'ny fividianana fitaovana famokarana ara-teknika.
Zhao SP, Lu ZL, et al. Xuezhikang, salan-tratran'ny cholestin, mampihena ny hetsika kardia amin'ny marary diabeta karazana 2 izay manana aretim-po amin'ny coronary: famakafakana subgroup ny marary manana diabeta karazana 2 avy amin'ny fanadihadiana fisorohana fanindroany faharoa (CCSPS). J Cardiovasc Pharmacol. 2007 Feb; 49 (2): 81-84.
Peng D, Fong A, Pelt AV (2017). "Fikarohana tany am-boalohany: ny vokatry ny famenim-bary masirasira mena amin'ny fatran'ny kolesterola amin'ny olon-dehibe". Am J Nurs. 117 (8): 46–54. .
Wang J, Lu Z, Chi J, Wang W, Su M, Kou W, et al. Fitsapana aretin'andininy maro momba ny fihenam-bidy serum lipid ho an'ny fanafody ny vary ara-boajanahary Monascus purpureus (masirasira mena) voaomana amin'ny fanafody sinoa nentim-paharazana. Curr Ther Res. 1997, 58 (12): 964-978.
1.Inona no atao hoe vary masirasira mena
2.Ahoana no fiasan'ny vary masirasira mena
3. Ny vary masirasira mena ve dia mamoaka zava-mahadomelina na fanampiana?
4. Tombony azo amin'ny masirasira mena
5. Dosin'ny masirasira mena
6. Vary mena masirasira vokarin'ny vokatra
7. Ny masirasira mena dia manaisotra ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina
8. Famenon-tsakafo hanina masirasira mena
9. fakana vary masirasira mena hividianana